सरिता गिरी भन्छिन्– ममाथि षड्यन्त्र भयो, अदालत जान्छु – Sudarshan Khabar
सरिता गिरी भन्छिन्– ममाथि षड्यन्त्र भयो, अदालत जान्छु
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीकी नेतृ तथा सांसद सरिता गिरीले आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने पार्टी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने बताएकी छन् । आफूलाई पार्टीले षड्यन्त्र गरेर पदबाट हटाएको गिरीको गुनासो छ ।
समाजवादी पार्टीले मंगलबार कारबाही गर्ने निर्णय गरेलगत्तै उनले भनिन्, ‘अनुशासनको कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ, यो अवैधानिक निर्णयलाई अदालतबाट चुनौती दिन्छु ।’
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भू-भाग लिम्पियाधुरासहितको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साअनुसारको निशान छाप बनाउन गरिएको संविधान संशोधनका लागि संसदमा भएको मतदान गिरीले बहिष्कार गरेकी थिइन् । पार्टी निर्णय विपरीत उनले संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संशोधन दर्ता गरेकी थिइन् ।
फरक धारणा राख्नै नपाउने भएपछि त सांसद हुनुको पनि के अर्थ भयो र ?
पार्टी एकीकरणपछि जनता समाजवादी पार्टी दर्ता प्रक्रियामा छ । हरेक काम संयुक्त निर्णयबाट भइरहेका छन् । तर, मलाई हटाउने निर्णय समाजवादी पार्टीले मात्रै गर्‍यो, किन ?
अनुशासनको कारवाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई मात्रै छ । तर, मलाई पदाधिकारी बैठकले कारवाही गरेको कुरा आएको छ । यो विधान विपरीत छ । यसलाई म अदालतमा चुनौती दिन्छु ।
प्रकाशित भएको : July 7th, 2020